Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha xilliyeed - Shiinaha Warshad xilliyeedka Qalabka Shiinaha
Bacriminta & daahirinta
Guddiga Goynta UV ...
Qaabeynta Qaabeynta MS-08 / MS-09 ...
Faahfaahinta Qiimeynta Danab 220V 6 ...
Sanduuqa Qadada Korantada
Qaabeynta Qaab-dhismeedka MK-03 Voltage 220 ...
Qaabeynta Qaabka MH-09 danab ...
Cayayaanka la qaadan karo R ...
Qaabeynta Qaabaynta MH-08 Lagu qiimeeyay P ...
Sifeeyaha hawada ee 2-in-1 iyo marawaxadda ayaa qaboojineysa booskaaga halka laga sifeynayo 99.79% xasaasiyadda iyo wasakhda. Naqshadeynta bilaa biilka ah way fududahay in la nadiifiyo oo amaan u ah carruurta. Is qabooji adoo xasilloon oo maskaxdu ku jirto miiraheeda hawada. Taageero bilaa biin ah oo leh nadiifinta & nadiifinta shaqada, afuuf oo ku nadiifi qiiqa leh taageerehan casriga ah.
Wareega DC Fan
Wareegga hawada taageere DC. BLDC mashiinka tooska ah ee tooska ah, naqshad isku dhafan iyo keydinta tamarta, waa lagu dari karaa kaneecada kaneecada. Sagaal-xawaare ah hawo bixinta. Si toos ah ugu lul dhinac dhinac, kor iyo hoos. Dhererka la hagaajin karo 1-2-4-8H waqtiga beddelashada. 5 habka xawaaraha: caadi, dabiici ah, hurdo, hooyada iyo uurjiifka, Habka ECO. Qaylada hoose ee leh 11dBA oo keliya .Six mitir oo hawo masaafo dheer ah.
Mashiinka aan nadiifka ahayn ee daahiriya
2-1-1 marawaxadda hawada sifeeye ayaa qaboojineysa booskaaga halka laga sifeynayo 99.79% xasaasiyadda iyo wasakhda. Naqshadeynta Bladeless way fududahay in la nadiifiyo oo ammaan u ah carruurta. Iyadoo aan lahayn wax duudduub ah ama garbaha, way fududahay in si fudud loo tirtiro isticmaalka shakhsi ahaaneed ee nadiifka ah gudaha iyo xafiisyada xafiisyada si loo hagaajiyo tayada hawada. Waxay ka caawisaa dadka sigaarka caba inay yareeyaan sunta hawada ku jirta. Waxay kaa caawin kartaa hagaajinta astaamaha neefta iyo xasaasiyadda manka. Waxay u fiicantahay qolalka carruurta, qolalka fadhiga iyo xafiisyada yaryar ilaa 30 mitir murabac.
Mini Qaboojiyaha Hawada
Naqshadeynta qaboojiyaha hawada ee yar yar ee la qaadan karo oo leh laba-taageere dabayl xoog badan. Waxay leedahay seddex heer oo hawo ah. Aad u qabow oo ku cusbooneysiiya baraf iyo biyo, shaqeynta qoyaan-la'aanta ceeryaanta, sii deynta ion-yada taban, haanta biyaha oo gooni ah, iska ilaali daadashada biyaha. Waxay haysaa qoyaanka maqaarkaaga ka dibna hawo qabow ka soo qaad si ay kaaga fogaato hawada qalalan oo aad ugu raaxaysato xagaaga qabow iyo kan cusub.
Ku Saabsan Meiling / MAK